UMichael Gross kuhambo lwe-Burt Gummer kunye 'neenyikima: Usuku olubandayo esihogweni' - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo UMichael Gross kuhambo lwe-Burt Gummer kunye 'neenyikima: Usuku olubandayo esihogweni'
UMichael Gross kuhambo lwe-Burt Gummer kunye 'neenyikima: Usuku olubandayo esihogweni'
by Waylon Jordan Aprili 27, 2018
ibhalwe ngu Waylon Jordan Aprili 27, 2018
Ukuba ubuza uMichael Gross, uya kukuxelela ukuba yeyona ndoda inethamsanqa iphila. Wayengadlali nje kuphela omnye wootata abakhulu kumabonakude kwi-sitcom ethi "Family Ties", kodwa xa umboniso waphela, wafumana indima yobomi bonke njengo-Burt Gummer, owayesinda ngompu kwi-horror ethandwayo -umdlalo franchise Ukugubha.
Gross, okwangoku obekade engena kwinxalenye yesithandathu yelungelo lokungena Ukungcangcazela: Usuku olubandayo esihogweni, kutshanje uhleli phantsi neHorror ukuze uthethe ngohambo lwakhe olumangalisayo kunye nendlela eqale ngayo ngokwenza imbali kumabonakude.
"Uzijonga njengezinto ezingenamsebenzi ezi zinto xa uzenza, kwaye awuyiqondi ukuba zithetha ntoni ebantwini ngelixa uzenza," utshilo umdlali weqonga. “Kodwa xa siqala ukwenza ii-Family Ties kwindawo ephambili ngo-1982, isandi esikufutshane nathi sasinefilimu ethi 'Taxi' apho. 'Laverne & Shirley' kwaye 'Happy Days' bebesadlala, 'uJoanie Loves Chachi' ebekwisitudiyo esidibeneyo. ”
Umboniso umndilili wababukeli abazizigidi ezingama-28 ngeveki, kwaye njengoko wawuphela ngo-1989, uGross wamangaliswa xa kuvuleka umnyango ongalindelekanga wamathuba.
"Eyokuqala Ukugubha ibindiphatha kakuhle kuba yenzeke kanye ngaphandle kwesango emva kwe 'Family Ties' kwaye iphendule imibuzo emibini, ”utshilo. “Ngaba buya kuba bukhona ubomi emva 'kwamaqhina osapho'? Ngaba abantu bangandamkela njengohlobo olwahluke ngokupheleleyo? ”
Okwangoku, emva komsebenzi onomdla kwindawo yokudlala edlala iindima ezininzi ngonyaka, uGross wayengenangxaki yokwenyani yotshintsho. Ngapha koko, wayenomdla ongakumbi wokuyenza, kwaye wayekuvuyela ukubonisa ubungqina babagxeki.
Ukunyaniseka kuwe olo tshintsho belungekho nzima. Yayibhalwe kakuhle kakhulu kwaye ndaziva ukuba ndiyayazi kwasekuqaleni le ndoda, ”ucacise watsho uGross. “Ndizive ndingonwabanga ukudlala uSteven Keaton owayeqhelekile. Ndiyakuthanda ukudlala ngabantu abaphambeneyo, kokukhona abantu beziphethe kakubi. ”
UMichael Gross kunye noReba McEntire kwiiTremor zokuqala
KuGross, nangona kunjalo, ukudlala uBurt kwehla ehamba umgca ocekeceke kakhulu, kwaye wachitha ixesha elininzi ecinga ukuba nini okanye njani "umntu ophambeneyo onezibhamu ezininzi" uyahlekisa, kwaye uba yinto eyingozi nini? Oku ikakhulu kwaba ngumbuzo ojolise ekukhanyeni kwenani elikhulayo lokudubula kwabantu.
“Kungenxa yeso sizathu ekugqibeleni sanyanzelisa kumgaqo wekhadinali Ukugubha, ”Utshilo umdlali. “Akukho mntu ujikisa umpu wakhe komnye umntu kwiimuvi zethu. Abantu ngabafana abalungileyo kwaye izilo ngabantu abangalunganga. Sonke silusapho lwabantu esilwa notshaba lokwenene. ”
Yayiyenye nje yezinto ezazidibene ezenza ukuba ilungelo lokuloba libe yimpumelelo, ukanti, emva kwefilimu yokuqala, kwabonakala ngathi ibhubhe ngaphambi kokuba iqale.
Abavelisi babengayazi ncam indlela yokuthengisa kuqala Ukugubha xa yayikhutshwa kumabala emidlalo. Bathembise abaphulaphuli imovie enzima eyoyikisayo kwaye basilela ukuhambisa. Emva kweeveki ezimbini kuphela kumdlalo weqonga, ifilimu yatsalwa yathunyelwa kwividiyo.
Kwaye ke kwenzeka into yomlingo.
Ii-90s zokuqala yayiziintsuku zozuko kwiivenkile eziqeshisa ngevidiyo, kwaye Ukugubha amanani erenti aqale ukukhula ngokukhawuleza. Yayiluhlobo lonqulo olulandelayo ekungekho mntu ulindeleyo kwaye akukho mntu wayemangalisiwe kunoGross xa wafumana umnxeba wokubona ukuba anganomdla wokwenza into elandelayo.
Abantu babenditsalela umnxeba yonke le minyaka bathi, 'Uyakholelwa ukuba siza kuphinda senze enye?' Ndathi ke andixelelwanga kwaphela, ”wahleka watsho uGross. Kodwa kuyabonakala ukuba, yayigqithisiwe ngokungathi yimfihlo yomntu emdaka. Yayibambekile, kwaye abantu bafuna okungakumbi. ”
"Okungakumbi" kuguqulelwe kwindima yeGross ethatha indawo ephambili kwindawo ye-franchise. Inike uGross ithuba lokumba ngokwenene ukuba ngubani uBurt Gummer kwaye yintoni emqhubayo ukuba enze ukhetho alwenzileyo.
“Ukungena kwethu Iinyikima 5, Ndabaxelela ukuba sidinga eminye imiceli mngeni eBurt. Siyazi ukuba uyakwazi ukuzingela izilo. Kodwa singamcela njani umngeni? ” Gross uthe. "Sangenisa ke unyana wakhe sabuza, 'Uziva njani umntu ongayedwa xa kukho umntu ofuna ukuba yinxalenye yobomi bakhe?'”
Kwakunjalo, njengoko kwafumanekayo, umceli mngeni onomdla kunye nohlekisayo wokuba uBurt wayengaphezulu kwaye ekugqibeleni yena nonyana wakhe beza… ke, masiyibize ngokuba sisivumelwano.
UJamie Kennedy kunye noMichael Gross kwiNgqungquthela
Ngefilimu yamva nje, uBurt nonyana wakhe, uTravis (odlalwa nguJamie Kennedy), bazingela iiGraboids kunye, ngeli xesha kwiindawo ezikumantla eCanada apho uBurt aphela ejongene nomceli mngeni wakhe omkhulu, okwangoku: ukubhubha kwakhe.
"Indoda elawula kuye yeyona nto ibalulekileyo ebomini bayo ilunqanda njani olo lawulo?" umdlali ubuzile. "Yeyona nto inzima ebomini bakhe ukungakwazi ukukhokela umlo."
Ukungcangcazela: Usuku olubandayo esihogweni, ezakubetha iDVD neBlu Ray nge-1 kaMeyi, zingqina ukuba le franchise ayilahlekanga nakuphi na ukulunywa kwayo. Inyaniso, Ukugubha isenokuba yeyona franchise ingaguquguqukiyo yohlobo lwayo. Abasayi kubaphoxa abalandeli babo, kwaye njengoko u-Gross watshoyo ekupheleni kodliwanondlebe, abo balandeli baya kuthi ekugqibeleni bagqibe ngesiphelo soluhlu luye lwazanywa kwaye luyinyani.
"Awunakuze uxele into eza kwenzeka," ucacisile. “Ndihlala ndibheja ngokuchasene neHollywood. Ukubonisa ishishini yi-5% show kunye ne-95% yeshishini kodwa ukuba isithandathu siqhuba kakuhle, ndicinga ukuba sinethuba lokubuya. ”
Jonga itreyila Ukungcangcazela: Usuku olubandayo esihogweni Apha ngezantsi kwaye uyijonge kwiDVD, iBlu Ray kunye neVOD ngoMeyi 1, 2018!
udliwanoUMichael GrossUkugubhaukungcangcazela: usuku olubandayo esihogweniImifanekiso YendaloWaylon Jordan
I-trailer 'yelifa' ibangela isiphithiphithi ekuboniseni 'uPeter Rabbit'
UStephen King's 'Uhambo olude' luya kwiNew Line Cinema